प्रहरीको सुरक्षा फितलो, पथरी शनिश्चरेमा घटे यस्ता घटना – Media Np Online
मुख्य पृष्ठ /News/प्रहरीको सुरक्षा फितलो, पथरी शनिश्चरेमा घटे यस्ता घटना
प्रहरीको सुरक्षा फितलो, पथरी शनिश्चरेमा घटे यस्ता घटना
काठमाडौं- मुस्कान सहितको प्रहरीले जनतालाई दुख दिन थाले पछि प्रहरी मेरो साथी भन्ने शब्द उक्तीमा मात्रै सिमित रहेको देखिन्छ । मंसिरको अन्त्य तिर पथरी इलाका सम्हालेका डि एस पि दिलिप कुमार गिरीले बर्दिको दुरुपयोग गरेको देखिन्छ । गिरी पथरीशनिश्चरे आए यता पथरीशनिश्चरेमा धेरै विबादित बन्दै गएका छन ।
गएको ८ महिनामा पथरीशनिश्चरेमा भएका गतिविधी र डि एस पि को कमाण्डमा भएको प्रहरी सुरक्षा ब्यवस्थाले आम पथरीशनिश्चरेवासीमा त्रास छाएको छ । गएको ८ महिनामा प्रहरीले सर्वसाधारणलाई कुटपिट गर्नु, ठुला तथा धनाड्यलाई सपोर्ट गर्नु, मजदुरलाई पिडा दिनु, जुवा खेलको पैसा लुकाउनु, पिडितको कुरा नसुनी पिडकको संरक्षण गर्नु जस्ता घटनामा डि एस पि गिरीले सपोर्ट गरेको देखिन्छ ।
डि एस पि गिरीले नेपालको कानुन सबैलाई बरावर हो, कानुले कसैलाई काखा कसैलाई पाखा नगर्ने तथा कानुन भन्दा बाहिर रहेर कुनै कार्य नगर्ने प्रतिकृया दिने गरे पनि पथरीशनिश्चरेबासीले आफु सुरक्षीत महसुस गर्न सकेका छैनन् । ७६ पुस देखि हाल सम्म घटेका र स्थानीयले भोगेका मुख्य घटना यस्ता रहेका छन ।
घटना नम्वर १. कागज पत्र, बील सहितको ट्याक्टरलाई दुख दिई बिना कारवाही छोड्नु ।
पुस २१ गते साँझ चिसाङ खोलाबाट बालुवा लिएर घर फर्कदै गरेको को २ त ४२६८ नं. को ट्याक्टरलाई नियन्त्रणमा लिई चोरीको आरोपमा जिल्ला पठाएको थियो ।
केही दिन अघि मात्र पथरीको इलाका प्रहरी कार्यालय सम्हालेका डि एस पि गिरीले मोरङ पथरीशनिश्चरेका राजेन्द्र रेग्मीले किनेर ल्याएको बालुवा चोरीको आरोप लगाउँदै जिल्ला समन्वय समितिमा पत्र काटेको भन्दै दुख दिएको रेग्मीले बताएका छन । उनले भने–“डिएसपि भनेर के गर्नु कागजात त हेर्न नजान्ने रहेछन्” भन्दै इलाका प्रहरी कार्यालय पथरीले अनावश्यक झन्झट दिएको रेग्मीले गुनासो गरेका थिए ।
२१ गते बेलुकी नियन्त्रणमा लिएको ट्याक्टरको नवीकरण फेल भएकाले नवीकरण गर्न डिएसपि गिरीले पठाएको तर नवीकरण गरेर आउँदा कागज पत्रै नहेरी जिल्ला समन्वय समितिमा जानु भन्दै दुख दिएको बताए । पटक पटक धाउँदा समेत डिएसपिले रसिद सहितको बालुवा चोरीको भन्दै दुख दिए पछि रेग्मी पत्रकारको सहयोग लिन बाध्य भएका थिए ।
घटना नम्बर २. फागुन १२ गते एक थुनुवा सँग ५ हजार मागेको समाचार आएपछि पुन प्रहरी कार्यालयमा ल्याएर कुटपिट गर्नु ।
फागुन ११ गते घरायसी झगडामा थुनामा परेका जोगबहादुर राईलाई १२ गते मिलापत्र गर्दा ५ हजार लिएको राईले सञ्चारकर्मीलाई बताएका थिए । पथरीशनिश्चरे–३ का जोगबहादुर राईलाई मापसे गरेर घर झगडा गरेको भन्दै एक रात थुनेको र कार्यालयको चौरी सफागर्न लगाएको थियो । भोलि पल्ट मिलापत्र गर्दा एक बिना बर्दिका प्रहरीले प्रहरी कार्यालयमै ५ हजार लिएको राईले बताएका थिए । उक्त घटना विभिन्न सञ्चार माध्यममा आएपछि प्रहरीले फेरि इलाका ल्याएर झुट बोलेको भन्दै २ झापड हानेको राईले बताएका थिए ।
प्रहरीको बिरुद्धमा बोलेको भन्दै घरैबाट ल्याएर पथरीका डिएसपी दिलिपकुमार गिरीकै अगाडि कुटपिट गरेको पीडितले बताएका छन् ।
डिएसपी गिरीले पैसा माग्ने प्रहरी कुन हो भन्दै देखाउन लगाएका थिए । तर सोहि समयमा केही प्रहरीहरु विदामा र केही प्रहरी सुरक्षामा खटिएका थिए । प्रहरीले कुटेपछि डर लागेकोले अब आफुले केहि नबोल्ने बताएका थिए ।
उक्त विषयमा इलाका प्रहरी प्रमुख प्रहरी नायव उपरिक्षक दिलिपकुमार गिरीसँग बुझ्दा प्रहरीबाट त्यस्तो भएको रहेछ भने पैसा असुल्ने प्रहरीलाई निलम्बन गर्ने बताएका थिए ।
घटना नं. ३ वीरेन्द्रनगर साकोस चोरीमा संलग्नलाई पक्राउ गर्न नसक्नु
फागुन २५ गते सोमबार वीरेन्द्रनगर बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको कार्यालय चोरी भएको थियो । बेलुकाको ११ः२० बजे कार्यालयमा प्रबेश गरी तोडफोड गर्ने व्यक्ती सि सि क्यामरामा कैद भए पनि हाल सम्म पक्राउ परेका छैनन् । घटनामा कुनै आर्थिक क्षति नभए पनि प्रहरीको सुरक्षाको कमजोरीको फाईदा उठाउदै साकोस फोडिएको थियो । यस घटनाले पनि प्रष्ट पार्दछ पथरी कति सुरक्षीत छ भन्ने ।
घटना नम्वर ४ वडा नं. १० का दिपक लिम्बुको अपहरणकारी फरार
पथरीशनिश्चरे नगरपालिका–१० मुनाल टोल बस्ने २६ वर्षका दीपक लिम्बुलाई फागुन २७ गते होलिको रातको समयमा पूर्व तयारीको साथमा सोही वडाका यूवाहरुको समुहले सामुहिक रुपमा अपहरण गरी कुटपिट गरेको थियो । मरणासन्न अवस्थामा पुग्ने गरी कुटिएका लिम्बूलाई परिवारले एक हप्तापछि मात्र फेला पारेको थियो ।
परिवारले दीपकलाई गम्भीर अवस्थामा पाएको थियो । दिपकलाई उपचारका लागि विराटनगरस्थित विराट अस्पतालमा लग्यो । केही दिनको उपचारपछि उपचारकै क्रममा दिपकको मृत्यू भयो । दीपकलाई कुट्ने मध्येका एक मुस्कान राईलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ भने अन्यलाई इलाका प्रहरी कार्यालय पथरीले अझै पक्राउ गर्न सकेको छैन् । एक पछि अर्को घटनाले प्रहरीको सुरक्षामा प्रश्न उठ्ने गरेको छ ।
घटना नम्वर ५ प्रहरीद्वारा बजारमा निर्घात कुटपिट र ५ सय पटक उठबस
चैत २१ गते मोरङको पथरीशनिश्चरे ५ का रोहन शाहलाई बिना कारण प्रहरीले चरम यातना दिएको थियो । शाहलाई लकडाउनको समयमा प्रहरीले बजार उठाउँदै गरेको भिडियो खिचेको भन्दै निर्घात कुटपिट गरि उठ बस गराएको थियो । घर माथि रहेका शाहलाई प्रहरीले घर माथि नै गएर जवरजस्ती बाटामा ल्याएर ५ सय पटक उठबस गर्न लाएको शाहले बताएका थिए । पथरीशनिश्चरे नगर क्षेत्रमा प्रहरीबाट पीडित बनेको यो पहिलो घटना भने होइन । यस कार्यले जनताहरु प्रहरीबाटै असुरक्षीत रहेको देखिन्छ ।
घटना नं. ६ सर्वसाधारणको किटानी दर्ता हुदैन
चैत २९ गते पथरीशनिश्चरे ५ का रामकृष्ण महतो र प्रमिला महतोलाई एक समुहले कुटपिट गरी बक्रा खोलाको खरबारीमा फालेको थियो । उर्लाबारी पौडेलचौकका खगेन्द्र भट्टराई र राजेन्द्र थापा सहित ३ जनाको समूहले कुटपिट गरि बेहोस पारी फालेका प्रमिला महतो बताउछिन । कुटपिटबाट बेहोस भएका महतोको उपचारका क्रममा भोलिपल्ट होस आएको थियो । कुटेको ६ दिन पछि निवेदन किटानी हालेको तर २ महिना हस्पिटलमा उपचार गरेर र्फकदा सम्म किटानी दर्ता नभएको पिडित महतोले बताएका थिए ।
महतो परिवारले प्रहरीबाट न्यायको आस मरे पछि पत्रकार संग घटनाको जानकारी गराइ न्यायको माग गरेका थिए । महतो परिवार पत्रकार संग पुगेको २४ घण्टा नपुग्दै प्रहरीले घटनामा संलग्नलाई पक्राउ गरि मिलापत्र गराएको थियो । जुन कार्यले न्यायको धज्जी उडाएको देखिन्छ ।
घटना नं. ७ चैत ३१ गते सिकारी विच छुरी हानाहान
चैत ३१ गते राति जंगलबाट हरिण र बँदेलको चोरी सिकार गरी ल्याएको मासु बाँड्ने क्रममा छुरी प्रहार भएको थियो । पथरीशनिश्चरे १० का भीमबहादुर लिम्बू, प्रकाश लिम्बू र रबिन राई पक्राउ परेका थिए । पथरीशनिश्चरेका जंगलमा सुरक्षालाई चुनौती दिदै जंगलमा सिकार खेल्नेको संख्या बढ्दो छ । घटनामा संलग्न तीनै जनालाई प्रहरीले ज्यान मार्ने उद्योगमा मुद्धा चलाएको थियो । झगडा पछि घट्ना स्थल पुगेको प्रहरी टोलीले हरिण र बँदेलको २ किलो मासुसमेत बरामद गरेको थियो । बरामत गरेको हरिण र बँदेलको मासु सब डिभिजन वन कार्यालय पथरीलाई प्रहरीले बुझाएको थियो ।
घटना नम्वर ८ प्रहरीकै अगाडि एक मजदुर माथि दुव्र्यवहार हुनु ।
बैशाख ४ गते पथरीशनिश्चरे २ मा रहेको विश्वहाङ राईस मिलमा कार्यरत श्रमीक लक्ष्मी मण्डललाई पथरी उद्योग वाण्ज्यि संघका अध्यक्षले दुव्र्यवहार गरेका थिए । प्रहरी नायव उपरिक्षक दिलिपकुमार गिरी र पथरीशनिश्चरेकी उपमेयर कै अगाडि ब्यापार संघका अध्यक्षले मण्डल माथि दुव्र्यवहार गर्दा प्रहरीले अध्यक्षलाई संरक्षण गर्दै घर लगेको स्थानीयले बताएका थिए ।
घटना नम्वर ९ प्रहरीकै अगाडी अबैध रुख कटान
बैशाख ५ गते लकडाउनको समयमा पथरीशनिश्चरे ट्राफीक कार्यलय अगाडीका ३ ओटा सालको रुख कटान भएको थियो । जुन स्थानमा पथरीशनिश्चरेको पुर्व नाका रहेकाले प्रहरीको २४ घण्टा चेकिङ थियो । ट्राफीक कार्यलय अगाडी धिमाल ग्राम थानको तीनवटा सालका रुख काटीदा सम्म प्रहरीले नदेखे जस्तै गरेको थियो ।
रुख काट्ने कानेपोखरीका पारस बुढाथोकी र शंकर लिम्बु रहेका थिए । २ वटा रुख ढाले पछि तेस्रो रुख काट्दा काट्दै घटना स्थलमा बन रक्षकहरु आई पुगेको मात्र प्रहरी त्यस ठाउमा पुगेको थियो । घटना स्थलबाट फरार रहेका बुढाथोकी र लिम्बु हाल सम्म पनि पक्राउ गर्न सकेको छैन । प्रहरीकै अगाडी रुख काट्दा प्रहरीले थाहा नपाए जस्तो गर्नुले गलत कार्यलाई प्रहरीले संरक्षण गरेको देखिन्छ ।
घटना नम्वर १० प्रहरीद्वारा सार्वजनिक स्थानमा निर्घात कुटपिट
बैशाख ७ गते मलामी गएर फर्किएका एक युवालाई प्रहरीले सार्वजनिक स्थानमा कुटपिट गरेको थियो । मलामी पुगेर फर्किएका एक युवालाई पथरीशनिश्चरेको पुर्व चेकिङमा रहेको प्रहरीले निर्घात कुटपिट गरेको थियो । मलामी गएर मोटरसाइकलमा फर्किएका युवाले प्रहरीलाई हातले साङ्केतिक चिन्ह देखाउदै मनोबल गिराउने कार्य गरेका थिए । उक्त युवाले प्रहरीलाई उतेजित बनाएका कारण प्रहरीले एक किलोमिटर पछ्याएर सार्वजनिक स्थानमा निर्घात कुटपिट गरेको थियो ।
घटना नम्वर ११ तास खेलबाट पक्रीएको ९४ हजार रुपियाँको १६ हजारको कागज बनाएर छोडिदिनु ।
बैशाख २५ गते मोरङको पथरीशनिश्चरे–१, स्थित पथरी बजारमा जुवाको खालबाट १० जनालाई इलाका प्रहरी कार्यालय पथरीले पक्राउ गरेको इप्रका पथरीका डिएसपी दिलिपकुमार गिरीले बताएका थिए ।
उनीहरुको साथबाट ९४ हजार पक्राउ रुपियाँ जफत गरिएको थियो । तर, १६ हजारको मात्र कागज बनाएर छोडेको थियो । अन्य रुपियाँ केहि समय पछि फिर्ता गर्ने सहमति भएको हल्ला चलाए पनि उक्त रकम हाल सम्म जुवाको खालमा बसेका कसैले पनि हात पारेका छैनन ।
घटना नम्वर १२. बाईक र पसल चोरी हुनु ।
पथरीशनिश्चरेमा प्रहरीले सुरक्षामा कडाई गरे पनि पथरीबासीले सुरक्षीत महसुस गरेका छैन्न भने छोटो समयमा भएका हत्या हिंसा, प्रहरीको दम्भ, पसल चोरीका घटना, झैभगडा, प्रहरीले घुस लिएका जस्ता घटनाहरु बाहिर आएका छन ।
छोटो समयमा ईलाका, बेश र सशस्त्रको सुरक्षा घेरा भित्रबाटै मोटर वाईकहरु चोरी हुनु, एक आपसमा छुरा प्रहार हुनु, प्रहरीबाट सार्वजनीक स्थानमा कुटपिट हुनु उदाहरण हुन ।
सुरक्षाको हिसावले पथरीशनिश्चरे १ मा डिएसपि सहितको इलाका र बेस क्याम त छ तर पनि प्रहरी र बेस क्याम आस पासबाटै मोटरसाईकल र पसलहरु चोरी हुने गरेको छ । इलाका, बेस सँगै दुई वटा सशस्त्र प्रहरीको कार्यालय भए पनि पथरीबासीले सुरक्षित महसुस गर्न भने सकेका छैनन् ।
घटना नम्वर १३. काङ्ग्रेस नेता तामाङ माथि पथरीमा छुरा प्रहार
इलाका, बेस सँगै दुई वटा सशस्त्र प्रहरीको कार्यालय भए पनि पथरीबासीले सुरक्षित महसुस गर्न भने सकेका छैनन् । चैत २१ गतेको घटना हेर्ने हो भने पथरीशनिश्चरेमा १ का काङ्ग्रेस नेता दिलिप तामाङ माथि छुरा प्रहार भएको थियो । बाटो वन्द गरेको विषयमा विवाद हुदा काङ्ग्रेसका नेता तामाङमाथि स्थानीय बिजय लिम्बुले छुरा प्रहार गरेका थिए । लिम्वूलाई प्रहरीले घटना घटेको १ घण्टामा नियन्त्रणमा लिएको थियो । लिम्बु धरैटिमा छुटेका छन भने तामाङ्ग उपचार पछि घर फर्कीएका छन ।
घटना नम्वर १४ प्रहरीले पक्राउ गरेको लोपोन्मुख वन्यजन्तु गायब
पछिल्लो समय विवादित बन्दै गएको इलाका प्रहरी कार्यलय पथरीले पक्राउ गरेको लोपोन्मुख प्रजातिको सुन गोहोरो र टोके –टोके गायव गरेको थियो । घरायसी झगडामा ५ हजार घुस माग्ने देखि प्रहरीको विरुद्ध बोल्दा कुटपिट गर्ने, मलामी गएर फर्किएकालाई सार्वजनिक स्थानमा कुटपिट गर्ने, घरमा बसेका विद्यार्र्थीलाई जवरजस्ती बाटोमा ल्याएर कुटपिट गरि उठबस गराउने लगायतका घटनामा विवादित बनेको इप्रका पथरीले लोपोन्मुख सुन गोहोरो र टोके टोकेका विषयमा फरक फरक कुरा गरेका थिए ।
मोरङ्गको पथरीशनिश्चरेमा प्रहरीले मोटरसाइकल चोरी गरी बिक्री गर्ने ४ जना गिरोह र १ जना मोटरसाइकल ग्यारेजका सञ्चालक र कामदारलाई पक्राउ गरेको छ । प्रहरीले असार ३१ गते उनीहरुले चोरी गरेको मोटरसाइकल सहित ६ जनालाई पक्राउ गरेको छ । उनीहरुवाट लोपोन्मुख प्रजातिका वन्यजन्तु सुन गोहोरो र टोके टोके वरामद गरे पनि त्यसलाई भने प्रहरीले लुकाएको छ ।
घटना नम्वर १५ ईप्रकामा बन्दै गरेको भवनका लागि रकम उठाउनु ।
इलाका प्रहरी कार्यलय पथरीले बनाउदै गरेको भवनका लागि नगरले ६ लाख रकम सहयोग गरेको छ । तर प्रहरीले सोहि भवनका लागि विभिन्न संघ संस्थाबाट नगद र जिन्सी सहयोग उठाउदै आएको छ । डि एस पि गिरीले सामुदायीक वन, बाणिज्य संघ लगायत पथरीशनिश्चरेका ब्यापारी ब्यावसायीहरु संग भवन र गाडि बनाउने भन्दै रकम माग्ने गरेका छन ।
माथिका घटनाले पथरीशनिश्चरे कतिको सुरक्षीत छ भन्ने प्रस्ट देखाउछ । प्रहरीले सुरक्षाका लागि अहोरात्र खटे पनि छोटो समयमा घटेका अपराधीक गतिविधीको क्रम बढ्दो छ । अपराधीक गतिविधीलाई निरुसाहित गर्न प्रहरीले ठाउँठाएँमा सुरक्षा जाँच राखेको छ । चैत महिनामा जिल्लामा उत्कृष्ठ काम गर्दै डि एस पि गिरी ‘पुलिस अफ द मन्थ’ को उपाधि प्राप्त गर्न सफल भएको देखिन्छ ।
गिरीले वषौ देखि अदालतमा मुद्धा परी पक्राउ पर्न नसकेका दोषीहरुलाई पक्राउ गर्नुका साथै आफ्नो इलाकाको दैनिक शान्ति सुरक्षामा सक्रियता देखाएबापत जिल्ला प्रहरी कार्यालयले उनलाई सो उपाधि प्रदान गरेको थियो ।
थानकोटमा डिजेल बोकेको ट्याङ्कर प’ल्टियो
आज मन्त्रीपरिषद् बैठक बस्दै, यस्तो हुनेछ छलफल